FAHALASAN’NY PROFESORA ZAFY ALBERT : Efa tafapetraka ny lamina handraisana ny razana ao Ambilobe
Taorian’ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notanterahana tao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena, omaly ho fanaovam-beloma farany ny Filoham-pirenena teo aloha, ny profesora Zafy Albert... 17 octobre 2017
Izay rain’ny demokrasia dia nizotra nianavaratra ny tranovorona misy ny nofo mangatsiakan’ity farany ary hamakivaky ny Faritra Betsiboka ,Sofia ary Diana.
Araka ny loharanom-baovao voaray, miomana fatratra handray ny razana ny mponina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy.
Taorian’ny fivoriana nataon’ny mpitondra fanjakana ao Ambilobe niaraka tamin’ny tompon’andraikitra hafa sy ireo raiamandreny ary ny mpandraharaha ny alahady teo dia fantatra fa handrasana ao amin’ny kolejy « St Joseph » ny nofo mangatsiakan’ity olomanga ity alohan’ny handevenana azy any amin’ny fasan-drazany ao amin’ny kaominina ambanivohitra Betsiaka. Hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ihany koa hotanterahina ao an-drenivohitr’Ankarabe ary anisan’izany ny finoana silamo.
Tsara ny manamarika fa nanolotra omby avy ny Ben’ny tanànan’Ambilobe sy ny solombavambahoaka voafidy any an-toerana ary ireo mpandraharaha maromaro ho fandraisana anjara amin’ny fikarakarana ny olona hitsena ny razana. Efa maro ny olona tonga ao Ambilobe ka anisan’izany ry zareo avy any amin’ny Faritra Sava. Vinavinaina amin’ny alarobia 18 oktobra ho avy izao ny hahatongavan’ny razana ao Ambilobe.
Araka ny lamina napetraka dia ny zoma ho avy izao no hiainga ao an-drenivohitra Ankarabe ny razana ho any Betsiaka. Hotanterahina ny sabotsy 21 oktobra kosa ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ity filoha teo aloha ity ao amin’ny fasan-drazany.
Malahelo ary mahatsiaro very olomanga sy Raiamandreny ny vahoakan’ny faritanin’Antsiranana.
A.Lepêcheur sy Mpanjono